Fitsangantsanganana kely: mpizahatany gaga ao amin'ny hotely Guatemala City taorian'ny horohorontany tamin'ny 6.9 tamin'ny 1:29 maraina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Guatemala » Fitsangantsanganana kely: mpizahatany gaga ao amin'ny hotely Guatemala City taorian'ny horohorontany tamin'ny 6.9 tamin'ny 1:29 maraina
Jona 14, 2017
eTN Mpamaky sy mpizahatany Josh Gates nisioka hoe: A Ny horohoron-tany 6.9 dia nanakodia fotsiny Guatemala City. Fitsangatsanganana kely eto amin'ny rihana faha-15 amin'ny trano fandraisam-bahiniko. Ok… ka… niverina natory?
Ny horohoron-tany mafy dia refesina tamin'ny 6.9 tamin'ny 1.29 maraina, ny alarobia maraina. Teo akaikin'ny sisintanin'i Mexico no nisy azy:
143 km W of Guatemala City, Goatemala / pop: 995,000 /
15 km N of San Marcos, Goatemalà / pop: 25,100 /
5 km SE of Tejutla, Goatemalà / pop: 2,700 /
Amin'ny ankapobeny, ny mponina ao amin'ity faritra ity dia mitoetra amin'ny rafitra mora tohin'ny horohoron-tany, na dia misy aza ny tranobe maharitra. Ny karazana tranobe mora tohina dia ny rindrin'ny fotaka sy ny fananganana tsy ara-dalàna (vy, hazo, GI sns).
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy tatitra momba ny fatiantoka, fa ity karazana horohoron-tany ity dia mety hiteraka fahavoazana lehibe sy fandrahonana ho amin'ny fiainana.
Air Seychelles dia nanambara ny serivisy codeshare any Beijing
Fizahan-tseza Benelux an'i Seychelles isan-taona mankany amin'ny tanjaka